Iphrofayela Yenkampani - Shenzhen Antmed Co., Ltd.
I-Shenzhen Antmed Co., Ltd. igxile ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekukhiqizeni, ekuthengiseni nasekusetshenzisweni kwamadivayisi ezokwelapha athuthukile kwezobuchwepheshe, okuyimikhiqizo emboza ukucabanga kwezokwelapha, ukuhlinzeka ngenhliziyo nangokuphathelene nokuhlinzwa okuncane, i-anesthesia, ukunakekelwa okujulile neminye iminyango.
U-ANTMED ungumholi wemakethe yasekhaya emkhakheni wesirinji onengcindezi enkulu nasemkhakheni wemboni weDisposable Pressure Transducers. Sinikezela ngesixazululo sokuma esisodwa sama-injektha emidiya e-CT, MRI kanye ne-DSA, okudlekayo kanye nengcindezelo ye-IV. Imikhiqizo yethu ithengiswa emazweni angaphezu kwezi-100 nezifunda ezinjengeMelika, iYurophu, i-Asia, i-Oceania ne-Afrika.
Ngokugcizelela kwisisekelo se- "Quality is Life", u-Antmed wayesungule uHlelo Lokulawulwa Kwekhwalithi ngokuya ngezidingo ezivela ku-EN ISO 13485: 2016, 21 CFR 820 kanye nemithethonqubo ehlobene evela kumalungu e-Multi Device Single Audit Procedure (MDSAP). Inkampani yethu ithole isitifiketi se-EN ISO 13485 QMS, isitifiketi se-MDSAP kanye ne-ISO 11135 Ethylene Oxide service sterilization for Medical device Certification; sithole nokubhaliswa kwe-USA FDA (510K), Canada MDL, Brazil ANVISA, Australia TGA, Russia RNZ, South Korea KFDA nakwamanye amazwe. U-Antmed uklonyeliswe ngendondo yokuba ngumkhiqizi wamadivayisi wezokwelapha esifundazweni saseGuangdong iminyaka eyisithupha ilandelana.
I-ANTMED yiNational Hi-Tech Enterprise enamakhono aqinile ekukhuleni komkhiqizo, ukukhiqizwa kwesikhunta, ukukhiqizwa okukhulu, amanethiwekhi wokuthengisa asekhaya nakwamanye amazwe, futhi inikeze amakhasimende izinsizakalo ezenezelwe. Siyaziqhenya ngempumelelo yethu futhi silwela ukwenza iminikelo emihle ekuguqukeni kwezokwelapha eChina kanye nasembulungeni yonke yomkhakha wezokukhiqiza waseChina ophakathi nendawo ukuya phezulu. INHLOSO yesikhathi esifushane sika-ANTMED ukuba ngumholi embonini yezithombe eziqhathanisa umhlaba wonke, futhi umbono wesikhathi eside ukuba yinkampani ehlonishwa umhlaba wonke embonini yamadivayisi wezokwelapha.
Ukuba yinkampani ehlonishwa umhlaba wonke embonini yedivayisi yezokwelapha.
Gxila ekusungulweni komkhiqizo onqenqemeni ekunakekelweni kwezempilo.
Ukuze ube ibhizinisi lokuziphatha nelinomthwalo lokho kuzokwazisa abasebenzi bethu futhi kukhule nabalingani bethu.
Sungula i-QMS ekhombisa amakhasimende ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nensizakalo.